Gadra nitsoaka an’Antanimora : tratran’ny zandary teny Ampitatafika Rakotoniaina Raphalque · Aponga
Rakotoniaina Henintsoa Raphalque, iray amin’ireo gadra telo nandositra ny fonjan’Antanimora, ny alin’ny 10 hifoha 11 febroary 2018 lasa teo no voasambotry ny zandary avy ao amin’ny poste fixe Faliarivo tao Malaza Ampitatafika, ny alahady teo tamin’ny 10 ora maraina. Voasambotra niaraka taminy koa ny vehivavy iray sakaizany izay nanafina azy tao an-tranony. Araka ny fanazavan’ny zandary, nahatsikaritra ny mponina fa misy olona vaovao vao nifindra ao amin’ny trano iray ao an-toerana ka mitovitovy tamin’ny sarin’ilay gadra nitsoaka ny fonjan’Antanimora nasehon’ireo zandary mpanao fisafoana tamin’ny olona teny amin’ny faritra nolalovan’izy ireo tamin’ny fotoana nandosirany ny fonja, ny lehilahy iray mipetraka ao amin’ity trano ity.
Tsy nety nivoaka ny trano mihitsy ity lehilahy ity nandritra ny herinandro nahatongavan’izy ireo tao ka vao mainka nanamafy ny ahiahin’ireo mponina izany ka nampandre ny zandary avy hatrany izy ireo. Tonga teny an-toerana nametraka ny paikady rehetra hisamborana azy ny zandary. Ilay vehivavy sakaizany no namoha ny trano tamin’ny fotoana nahatongavan’ny zandary. Namoha trano izy sady mahimahina. Niafina tao ambany fandriana Rakotoniaina Raphalque ka noraisim-potsiny. Fantatra taorian’izay fa ilay gadra nandositra ny fonja tokoa ity tratra ity. Voasazy hanao asa an-terivozona 15 taona noho ny fanafihana mitam-piadiana sy vono olona tao Antanimora izy.
Tsiahivina fa andro vitsy taorian’io fandosirana fonja io dia efa tratran’ny zandary tao Ambohidratrimo ny iray tamin’izy telo lahy ka ilay fanintelony atao hoe Rafalimanana Nirina Jean Dominique, mpanamboatra vola sandoka voasazy hiasa an-terivozona mandra-pahafaty sisa no tsy mbola azo. Mangataka fiaraha-miasa amin’ireo olona tsara sitrapo hatrany ny zandarimaria.